प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वा’सको मत नपा’उने प’क्का ; के होला त अब ? – Sadhaiko Khabar
प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वा’सको मत नपा’उने प’क्का ; के होला त अब ?
प्रकाशित मिति: आइतबार, बैशाख २६, २०७८ समय: १३:५५:१२
काठमाडौ/ प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत नपाउने लगभग प’क्का भएको छ । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले विश्वासको मत नदिने भएका छन् ।
उनको प’क्षमा रहेका जसपाका नेताहरु पनि तट’स्थ बस्ने भएपछि ओलीले विश्वासको मत नपाउने प’क्का जस्तै भएको हो । नेकपा एमालेकै माधव नेपाल प’क्षले पनि ओलीको सरकार गिरा’उन सांसदवाट राजि’नामा दिने निर्णय गरेका छन् ।
ओली इतरका सबै दल एक ढि’क्का भएपछि उनको विश्वा’सको मत पाउने सम्भावना लगभग सकिएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वा’सको मत लिने प्रयोजनका लागि सोमबार विशेष अधिवेशन बोलाइएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको दल एमालेका १२१ सांसद छन् । विश्वा’सको मत पाउन १३६ मत चाहिन्छ ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर विश्वा’सको मत दिन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोसहित बालुवाटार पुगेका ठाकुरले जसपाका मा’गहरू पूरा भइनसकेकोले विश्वा’सको मत दिन नसक्ने बताएका हुन् । जसपाका डा बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवले यस अघि नै विश्वासको मत नदिने प्रस्ट पारिसकेका छन् ।
‘महतो र ठाकुरले वालुवाटार पुगेर हाम्रा मा’गहरू अझै पूरा भएका छैनन् । मा’ग पूरा नभएको अवस्थामा हामीले तपाईलाई विश्वा’सको मत दिन सक्दैनौं’, भनेका छन् ।
६१ सांसद भएको प्रमुख विप’क्षी नेपाली कांग्रेसले विप’क्षमा मत दिने निर्णय गरेको छ भने ४९ सांसद भएको माओवादी केन्द्रले हालै मात्र सम’र्थन फिर्ता लिएकाले प्रधानमन्त्रीलाई मत दिने छैन । संसदको अंकगणितमा निर्णा’यक ३२ सांसद भएको जसपा थियो ।
जसपाको बाबुराम भट्टराई-उपेन्द्र यादव पक्ष’ले यसअघि नै ओलीको विप’क्षमा उभिने बताएको छ । महन्थ ठाकुर-राजेन्द्र महतो पक्षले पनि मत नदिने बताएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वा’सको मत नपाउने प’क्का भएको छ ।